8 dị mkpa CISCO CCNA Training & Cisco Certifications
CISCO CCNA Ọzụzụ & Cisco Certifications
1. Ngwongwo Okpokoro Ulochi IPv6
Nzube Ebumnuche IPv6 Boot Camp:
Ntube nke IPv6 Boot Camp Prerequisites:
2. Mee Cisco Multicast v2.0
Mee Cisco Multicast v2.0 Agụmakwụkwọ Ebumnuche:
Mee Cisco Multicast v2.0 mkpa:
4. CISCO CCNP Ntugharị na ngbanwe
CISCO CCNP Ntugharị na ịgbanwere ihe ndị chọrọ:
5. CISCO CCNA Ntugharị na Nwepu
Ihe CCNA Voice choro:
7. CCNA Nchọpụta nsogbu - CCNP TSHOOT
8. Ọzụzụ CISCO CCNA Nche
CISCO CCNA Nche Ọzụzụ Dị Mkpa:
Cisco CCNA bụ ọsụ ụzọ zuru ụwa ọnụ na IT na-enyere òtù aka ịnweta ohere nke echi site n'igosipụta ihe ndị ahụ dị ịtụnanya nwere ike ime mgbe ị na-elenye anya tupu oge ahụ.
Ndị ahịa Cisco na-amalite ihe na otu akụkụ dị mkpa nke DNA anyị na-eme ka ndị mmekọ na-akpachi anya na-arụ ọrụ na ha iji ghọta ihe ha chọrọ ma nye ndokwa ndị ga-eme ka ọganihu ha.
Echiche nke ndokwa na-aga ilebara ihe ịma aka ndị ahịa ụfọdụ anya dị na Cisco kemgbe mmalite ya. Otu di na nwunye Len Bosack na Sandy Lerner, ha na-arụ ọrụ maka Mahadum Stanford, dị mkpa ka ha na-ezitere ibe ha ozi site na ebe ha na-arụ ọrụ dị iche iche dị iche iche ma enweghi ike n'ihi mmebi iwu ọhụrụ.
A ghaghị ịmepụta ihe ọhụrụ iji jikwa agbata obi; na dika ihe ngbadoro ule ha - enwere imeghari nkwekọrịta di iche iche.
Ụfọdụ n'ime Cisco CCNA Training Course & Certifications na-ekwu n'okpuru:
Ihe ngosi Ntuziaka nke IPv6 Bootcamp (IPv6) Cisco Training on Demand course is intended to help understudies who now know IPv4 na-elekọta ma na-agagharị iji ghọta ọdịiche na IPv6 na-elekọta ma na-agagharị.
Usoro ahụ na-amalite site na ịkọwapụta IPv6 na-echekwa ka a hazie, nakwa ụfọdụ mgbakọ ọhụrụ na IPv6 nke na-akwado Adreesị Resolution Protocol (ARP) na Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP, ọmụmaatụ, IPv6 Neighbor Discovery Protocol (NDP).
A na-enyocha ụdị iche iche nke ọnọdụ IPv6 na ihe mgbaru ọsọ ị nwere ike ịchọta otu esi amata ọdịiche dị n'etiti IPv6 multicast, interface dị nso, na adreesị unicast.
N'oge gara aga, ụdị modul ahụ na-eme ka IPv6 mara ihe na nkwekọrịta dị na Routing Information Protocol (RIP) maka IPv6 (RIPng) na Open Short Path First (OSPF) maka IPv6 (OSPFv3).
A na-ezube usoro a maka ndị ọkachamara pụrụ iche chọrọ ichotakwu nke IPv6.
Mgbe ị gụsịrị akwụkwọ a, ị kwesịrị inwe ikikere:
Hazie IPv6 n'ụwa niile na adreesị onwe ha na ịgbanwee ihu
Nyochaa ọrụ nke autoconfig na otú ederede EUI-64 si emetụta ID ID nke 2016 Cisco nakwa yana offshoots.
Kpido nzukọ nke njikọ residential areas interface IDs
Jiri nlezianya nsogbu iji hụ mgbasa ozi ọkụ na ndị agbata obi na-egosi mgbe IPv6 ping
Hazie OSPFv3 tinye n'ọrụ ọtụtụ ókèala, ọmụmaatụ, squat zones na ọ bụghị n'ezie thickset ọdụ (NSSA)
Hazie ndị agbata obi OSPF maka ndị na-abụghị ndị na-agbasaghị ọtụtụ na-aga (NBMA) nhazi ndepụta
Hazie RIP nke IPv6
Mee redistribution ahazi maka OSPFv3 n'ime RIPng
Ogige Boot IPv6Ihe ndi choro ihe omuma:
Tupu iwere usoro a, ị kwesịrị inwe ikikere ime ihe ndị a:
Kọwaa usoro ihe omume na ịmepụta LANs ziri ezi
Nwere asambodo CCNA®, ma ọ bụ nkerịta
Nhazi, ihuenyo, na nyochaa RIP, IGRP gbalitere (EIGRP), na OSPF
Kọwaa ụdị nhazi IPv4
Kọwaa Usoro Protocol Ịntanetị (ICMP) na ARP
Ihe eji eme ihe Cisco Multicast (MCAST) v2.0 bụ ihe nkuzi nke ụbọchị ise na-ekpuchi ihe ndị dị mkpa nke IP multicasting, nke na-agụnye ngwa ngwa ọtụtụ, isi mmalite, ndị nnata, nchịkọta nchịkọta, na mgbakọ multicast IP, (dịka ọmụmaatụ, PIM) etinye n'ime n'ime otu mpaghara mpaghara (intradomain). A na-echekwa nsogbu nke gbanwere ọnọdụ LAN na ihe dị iche iche nke IP.
Usoro a na-enye azịza ndị pụrụ iche maka nhazi ngwa ngwa nke multicast IP n'ime sistemụ ma ọ bụ onye ahịa ịhazi. Usoro mmemme na-enye ụkpụrụ mmepụta na nhazi maka ojiji nke multicast IP na Cisco switches. Ndị ụlọ ọrụ ahụ na-enye ihe nrịba aka ahụ na-atụ anya na ị ga-eziga multicast IP n'ụzọ dị irè.
Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ a, onye mmụta ahụ ga-enwe ike izute ndị a n'ozuzu ha:
Gọọmentị multicast dị ugbu a, iji nyochaa ụdị bara uru nke IP multicasting na ọganihu na-egosipụta na multicasting IP, na-aghọta uru multicast IP na yiri provisos, na-ekpebi ụdị dịgasị iche iche nke ngwa ngwa ngwa na ihe mgbaru ọsọ njedebe iji ghọta ihe nyocha IP nke multicast na ya ọnọdụ multicast dị iche iche na ozi jikọọ adreesị oyi akwa, ma wepụta ngwá maka igbochi ọtụtụ iyi na mpaghara LAN.
Ọdịdị nke Nkwekọrịta Na-enweghị Nkwekọrịta na-ezughị ezu ọnọdụ (PIM-SM) dị ka mgbakwunye IP na-agbanwe agbanwe ugbu a kachasị dị ugbu a iji nabata ụkpụrụ nke mgbakọ na arụmọrụ dị iche iche, na-enwe ntụsara ahụ na njedebe nke ejikọtara na mgbakọ multicast dị iche iche, na ndokwa na izipu PIM- SM na mgbagwoju anya na IP dị iche iche.
Ihe ọmụma na aptitudes nke onye na-amụ ihe ga-enwe tupu ị gaa na nke a bụ dị ka nke a:
Ndenye Cisco Certified Network Associate (CCNA).
Nghọta ọrụ na ikike ndokwa maka Cisco na-agbanwe na LAN gbanwee.
Igosipụta Cisco IP Routing (ROUTE).
Ejiri Cisco Data Center Unified Computing Support Specialist iji nwalee ozi onye mmụta banyere isi ihe nke Cisco Unified System Computing na ikike ha ime actualize a na-emepụta data Data Center. Cisco Data Center Unified Computing Support Specialist ọkachamara ga-a ga-anwale na akụkụ ndị a:
Na-atụle Cisco Unified System B na C
Cisco Unified System Computing na ọrụ nlekota oru ugbo nhazi na gbanwee kpuchie
Iberibe onu Cisco Nexus ihe ezinụlọ.
Cisco Certified Network Professional (CCNP) Ntugharị na Switching certification kwadoro ikike ime ndokwa, actualize, kwenye na nyochaa netwọk mgbasa ozi dị nso na nke sara mbara na ịrụkọ ọrụ na ndị ọchịchị na-ebelata nchebe, olu, usoro ntanetị na nke vidiyo.
Nkwekọrịta CCNP na Switching na-adabara ndị na-erughị otu afọ nke nchịkọta usoro nchịkwa na ndị kwadebere ịmepụta ikike ha na ịrụ ọrụ na-adabere na usoro usoro mgbagwoju anya.
Ndị mmadụ rụzuru CCNP Routing na Switching egosiputa ikike ndị a chọrọ n'aka nnukwu ụlọ ọrụ, dịka ọmụmaatụ, hazie ihe eji emepụta, ịmepụta iwu, onye mmepụta ihe oyiyi ma ọ bụ ọkachamara usoro.
Ntughari ma gbanwee ozi mgbakọ site na asambodo a ga-enye ntọala na-adịgide adịgide dị ka ihe ndị a dịka ihe dị mkpa na netwọk anụ ahụ nke oge a na ihe ndị e mere maka echi.
Ihe nkwado Cisco CCNA Ntugharị na mgbagha Switching ma ọ bụ ihe ọ bụla Cisco CCIE ntinye aka nwere ike ịga dị ka ihe dị oké mkpa.
Ka ụlọ ọrụ na-akwaga n'ebe ndị ọkachamara na-achịkwa, ụdị na ngwa a chọrọ n'aka ọkachamara n'usoro usoro ihe omimi na-aga n'ihu ma dị mkpa karịa oge ọ bụla ọzọ na nchekwa ebe a.
Iji mee atụmatụ maka usoro ihe a, CCNA Routing na Switching certification ga-eme ka ị ghara ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ọganihu, ma jide n'aka na ị ga-adabere na usoro nhazi nke a chọrọ maka iji ihe eji eme ihe.
Cisco Certified Network Associate Voice (CCNA Voice) kwadoro ịkọ ozi dị elu na ihe nchịkwa achọrọ iji chịkwaa usoro olu. Nkwekọ Cisco CCNA Voice na-ekwenye na ikike achọrọ maka otu akụkụ ọrụ na mkpọlite ​​olu, dịka ọmụmaatụ, isi mmalite nke olu, ọkachamara olu, na onye nduzi olu. M
t kwadoro aptitudes na VoIP innovations, dịka ọmụmaatụ, IP PBX, nkwurịta okwu IP, aka, njikwa oku, na nhazi ozi ekwentị.
Ihe ndekọ CCNA Voice na-enyocha aptitudes na ozi achọtara na Cisco Unified Communications Manager. Ọ bụ ọtụtụ ndị na-ejikarị ya eme ihe, dịka ọmụmaatụ, ndị gọọmentị, nnukwu òtù, na mahadum.
Ihe ọzọ, CCNA Voice na-enyocha ikike na mmụta a mara na Cisco CallManager Express (CME) na Cisco Unity Express (CUE) na-ejikarị ndị mmekọ na ndị nta tinye ya n'ọrụ, dịka ọmụmaatụ, òtù dị iche iche na ndị nnọchiteanya 2,000, ụlọ ọrụ mkpọsa, na obere ụlọ akwụkwọ mpaghara.
Ihe obula nke Cisco CCENT, CCNA Routing and Switching or Cisco CCIE certification can go about as essential.
Nnwale a na-egosi na olileanya na-amị mkpụrụ nwere mmụta na aptitudes dị mkpa:
Nhazi ma mee nhazi nke ihe n 'onodu di mgbagwoju anya na netwọk ndi ozo
Jiri mmepụta ihe omumaputa na usoro usoro ITIL na-aga n'ihu iji dozie nhazi nsogbu
Ihe omuma a bu ntuziaka a choro maka ule a.
Nchọpụta nsogbu na ijigide Cisco IP Networks (TSHOOT)
Cisco Certified Network Associate Security (CCNA Security) kwadoro ịkọ ihe mmụta dị omimi na ihe ndị a chọrọ iji nweta netwọk Cisco.
Site na nkwekọrịta CCNA Security, onye na-enweta usoro ihe ngosi gosipụtara aptitudes achọrọ iji wuo nchebe, chepụta ihe ize ndụ na nsogbu na netwọk, na ihe ize ndụ nchebe dị oke ala.
Usoro ihe ọmụma nke CCNA Security na-eme ka nchebe nchebe nchebe, ntọala, nchọpụta na ịdebe ngwaọrụ ngwaọrụ iji hụ na izi ezi, nzuzo na ịnweta ihe ọmụma na ngwaọrụ, na ike na ọganihu nke Cisco jiri dị ka akụkụ nke nchebe nchedo ya.
Ihe ọ bụla Cisco CCENT ziri ezi, CCNA Routing na Switching, ma ọ bụ ihe ọ bụla CCIE nwere ike ịga dị ka ihe dị oké mkpa.
Ụzọ kachasị dị irè iji belata Ọnụ Ụgwọ Ọnụego na WordPress Site
3 IBM Training Course Onye ọ bụla na-arụ ọrụ kwesịrị iji